Ini ndinofanira kumisikidza chitoro chepamhepo neLAMP kana WooCommerce | Linux Vakapindwa muropa
Shandisa yako wega online chitoro Iyo izano rakanaka, kunyangwe hazvo paine kukwikwidza kwakawanda paInternet, mabhizimusi epamhepo ari kuwedzera uye aripo uye neramangwana. Kuva nechitoro chepamhepo seyakasiyana bhizimusi modhi kana kuisanganisa nechitoro uye nekuwedzera bhizinesi, mune yekutanga kesi unogona kuchengetedza mari kune vashandi, kurendesa nzvimbo nemimwe michina, nepo mune yechipiri kesi yaisazove kupenga zano kana.kuwedzera kutengesa kwako kupfuura miganho yenzvimbo yako.
Nemaonero akanaka uye kana uine mazano ekugadzira, akadai sekutengesa zvitsva, zvigadzirwa zvemunhu, kana izvo zvisingawanikwe nyore, unogona kuwana zvakanyanya kutengesa zvikamu. Iwo mafambisirwo ave kutotungamira makambani ekuendesa ayo iwe waunofambidzana nawo kuti uwane chigadzirwa chako kana sevhisi kunzvimbo dzese muhurongwa kana padanho renyika. Iwe unotoziva kuti nguva dziri kuchinja nekukurumidza uye mabhizinesi ari kuchinjira kwavari, kusasiiwa kumashure kunogona kuve mutsauko pakati pekubudirira nekutadza.
1 Chii chinonzi e-commerce kana elektroniki commerce?
2 Iko kukanganisa kunowanzoitika paunenge uchigadzira online chitoro
3 Zvemutemo zvinodiwa kuti ugadzire yako pachako chitoro
4 Chii chaunoda kuti umise yako sevha kuti utore chitoro chako?
Chii chinonzi e-commerce kana elektroniki commerce?
El e-commerce kana zvemagetsi zvekutengeserana Iyo mhando yeinternet yakavakirwa bhizinesi. Inosanganisira kutenga uye / kana kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi online. Kuti iyi nzira igoneke, iwe unoda chikuva chepamhepo, kushambadzira (pamhepo mune ino kesi), zvigadzirwa zvekutora zvigadzirwa kune avo vanogamuchira kana chiri chigadzirwa chemuviri, uye chikuva chekubhadhara (PayPal, inoendesa bhangi, kubhadhara kadhi , mari pakuendesa, nezvimwewo).
Rudzi urwu rwebhizinesi rwakakura zvakanyanya mumakore achangopfuura, achikurudzirwa nekushandiswa kwetekinoroji nyowani uye mabhenefiti aanopa. Tisati tataura nezvazvo zvinobatsira kune mutengesi, asi kune zvekare kune mutengi, nekuti kubva pa smartphone, piritsi kana PC, unogona kutenga zvakanaka chero chinhu mumaminitsi kubva chero kupi uye woigamuchira kumba mune imwe nyaya yemaawa kana mazuva.
Iko kukanganisa kunowanzoitika paunenge uchigadzira online chitoro
Imwe yemakanganiso makuru ndeye kusiira zvigadzirwa zvako mumaoko ekambani yakaipa yezvinhu, nekuti mutengi anogona kuneta nekumirira. Mutengesi kana anodonhedza pasi zvigadzirwa kana mbishi zvakakoshawo kuti kuve nekukurumidza uye kwemhando yakanaka, dzimwe nguva kuchengetedza kune vanotengesa kunogona kutipa mukurumbira wakashata. Vamwe vatengesi vanopa zvikamu kana zvinhu kuti vaite rumwe rudzi rwekudzidzira vanokanganwa gadzira blog kuperekedza chitoro uye panowanikwa zvinyorwa zvine dzidziso, mazano, DIY, kana nzira dzekushandisa chigadzirwa chakaburitswa. Izvi zvinogona kukurudzira mutengi uyo asina kubatwa nechigadzirwa asi nepfungwa.
Zvimwe zvinowanzoitika zvikanganiso ndezvokupinda munyika ino usingazive musika zvakanaka. Kuita kuongorora kwakanaka kweizvi uye zvemakwikwi ivimbiso. Makwikwi haatarisirwe pasiIwe unogona kugara uchiwana mazano kubva kwairi kana kudzivirira matambudziko avakagadzira. Rondedzero yezvikanganiso zvakajairika inopedzwa nemapurojekiti mausingapindire kana kusatora zvakanyanya, mapuratifomu ane mitengo yakakwira kwazvo, kana kusatombo kunetseka nezve traffic iyo yako webhusaiti inogadzira.
Zvemutemo zvinodiwa kuti ugadzire yako pachako chitoro
Eheka legalityKwete chete zvigadzirwa zvinotengeswa, asi bhizinesi rako, mubhadharo uye kuzivisa mutero, nezvimwewo, zvakakosha. Sezvo bhizimusi rekunyepedzera rinogona kukutungamira iwe kuti uvhare chitoro zvakanyanya kana kuve nematambudziko nemutemo zvakanyanya. Paunovhura chitoro chepamhepo, zvakanakisa kutsvaga rubatsiro kubva kune nyanzvi dzinogona kutipa makiyi akareruka ekuti zvive nezvose zvakarongeka uye vanogona kutipa zano nekusahadzika kwedu.
Izvo zvemutemo zvinhu zvaunofanirwa kutarisa zvinosiyana zvinoenderana nenyika yaunogara, sezvo mitemo haina kufanana kuSpain kana kune dzimwe nyika, sezvo isina kufanana chero nguva. Ndiri kureva, pamwe mutemo uchachinja uye zvaive zviri pamutemo nezuro zvinogona kunge zvisiri nhasi. Ive neshuwa ku:
Ita maitiro usati wavhura wechitoro chepamhepo, ndiko kuti, kunyoresa mu Zvehupfumi Zviitiko Mutero kana IAE kana usiri.
Namatira kune Retail Trade Regulation MutemoMune mamwe mazwi, tevedza zvinodiwa kuti utengese online, izvo zviri musimboti zvakafanana nechitoro chemuviri kunze kweiyo rezinesi rekuvhura, izvo zvisina basa kumabhizimusi epamhepo.
LSSI (Mutemo weMasevhisi eSosaiti yeSosaiti neElectronic Commerce) muchitoro chako chaicho. Ndiwo mutemo wakanyanya kukosha waunofanirwa kuremekedza, nekuti iwo une basa rekugadzirisa zvisungo pakutengesa online. Mariri ivo vanopinda kubva kune iyo dhata inodiwa yekutengesa kana kutenga, kune cookie cookie webhu, saka ihuru kwazvo.
Dziviriro Dhata Mutemo (LOPD) neruzivo rwekuvanzika rwevatengi, izvo zvinongopindira pane zvaunoita nedhata irori, asi zvakare nhanho yekuchengetedzeka kwayakachengetwa, nezvimwe.
Mamiriro ekushandiswa, ndiko kuti, uko zvinosungirwa uye kodzero dzevatengi nevashandisi zvinounganidzwa. Izvi zvinofanirwa kugamuchirwa pachine nguva usati watenga chigadzirwa.
Consumer Mutemo uye zvemagetsi zvekutengeserana. Chekupedzisira, zvemagetsi zvekutengeserana zvinodzorwa uye zvinofanirwa kuchinjika kune zvitsva zvinodiwa neEuropean. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kuratidza zvakajeka uye zvisina mubvunzo mutengo wekupedzisira wechigadzirwa uye usatsause, uve nenguva yekudzoka kwemazuva manomwe ebhizinesi kusvika kumazuva gumi nemana ekarenda, uve nefomu rekubvisa, fungidzira njodzi dzinogona kukonzerwa nechigadzirwa kana sevhisi. usabhadharise mari yekubhadhara nekadhi rechikwereti kana chero imwe mhando yekubhadhara iyo inoreva kuti mutengo wakakwira kupfuura izvo zvinodhura zvigadzirwa, nezvimwe.
Zvinotaridza kuomarara, asi hazvisi, uye sezvandinotaura, nerubatsiro rwehunyanzvi kana agency kugadziriswa zviri nyore ...
Chii chaunoda kuti umise yako sevha kuti utore chitoro chako?
Kuve neyedu webhusaiti nezvose zvatinoda kuitirwa pane server, isu tinofanirwa kuita kontrakiti yechitatu bato inomiririra iyo inotipa pekugara pane yavo maseva, kana kuseta yedu yega yemahara server. Zvichida iyi nzira yekupedzisira inokurudzirwa kana iwe usiri kuda kuisa mari muchitoro, asi pamwe unoda imwe mari kana iwe uchida webhusaiti ine yakakwira traffic traffic, kuisa mari mune yakadzikama Hardware uye ine simba network kubatana ... Asi pane mazhinji ekugamuchira masevhisi uye emitengo yese, senge SiteGround, iyo inopa hurongwa hwako WooCommerce Kubata kuita kwepamusoro kwatinokurudzira nekuti kunouya pamwe nekugadzwa-kwese-kwese kwese kwaunoda papuratifomu yako yekutengesa uye unogona kuchengetedza nekuisa software yatichataura nezvayo muchikamu chinotevera. Iyo zvakare inosanganisira yemahara SSL chitupa, otomatiki inogadziridza yeWordPress uye nekukurumidza tekinoroji rutsigiro 24-7-365.
Kana iwe uchiri kusarudza yako wega server kunyangwe zvese, unogona kuseta iyo LAMP server, ndiko kuti, kune avo vasingazive izwi iri, iri server server ine GNU / Linux inoshanda system, Apache webhu server, MySQL ( kana zvakafanana saMariaDB) sedhatabhesi manejimendi sisitimu uye PHP (Perl, Python) semapurogiramu mitauro yewebhu webhu.
Ose matekinoroji akabatanidzwa muLAMP server mahara uye emahara, saka hazvizotipe mari kana sendi. Isu tinongofanirwa kuve neyakavakirwa panyama (Hardware, network kubatana, ...) kuti ive inogoneka. Uye zvakare, ino sisitimu ndiyo inoshandiswa nenzvimbo zhinji dzazvino dzakaitirwa pawebhu, sezvo ichivimbika uye yakasimba, zvakanyanya kupfuura dzimwe nzira ...
Kana tangova nevhavha yakakwidzwa, ikozvino chinhu chakakosha chichava kugadzira webhusaiti yedu kwatinogona kupa zvigadzirwa / masevhisi uye zvese zvishandiso kumutengesi / mutengi. Pano isu tinogona zvakare kuenda kune vechitatu mapato kuti vagadzire webhusaiti kana mamwe masosi ayo anotopa kare akafanogadzirirwa masayiti, chimwe chinhu chisina kukurudzirwa zvakanyanya mumaonero angu. Imwe sarudzo huru ingave yekugadzira webhusaiti yedu nenzira yakapusa asi inochinja-chinja uchishandisa WordPress, izvo zvinotibvumidza isu kuve neakanakisa kwazvo hwaro hwekuvakira nyore uye pasina mutengo.
Uye zvakare, WP ine nhamba hombe yemapulagi ayo anogona kutibatsira kubata masocial network, akakosha kushambadzira, kuverenga kushanya, kuita SEO mabasa, nezvimwe. Imwe yemapulagi aya ndeye WooCommerce, yakanyatsogadzirirwa kugadzira yedu yega online chitoro. Iyo yemahara plugin, muchiSpanish uye mimwe mitauro, iyo inosangana neWordPress uye inoita kuti zvikwanise kumisikidza online chitoro ine repertoire yezvinosvika makumi mashanu zvigadzirwa.
Iwo makuru mashandiro ye WooCommerce ndeiyi:
Management yeakasiyana Maitiro Ekubhadhara:
Kiredhiti kadhi kubhadhara gateway
Kugadziriswa kweiyo kutumira mari (kana paine), zvinoenderana nehuremu, zviyero kana kuenda.
Kugadziriswa kweiyo mitero seVAT.
Kutungamira uye kugadzirwa kwe discount coupons.
Wedzera zvakasiyana hunhu uye misiyano yehunhu yeimwe yega yezvigadzirwa makumi mashanu kana masevhisi anotenderwa. Semuenzaniso kusarudza mavara, saizi, shanduro, ...
Ipa mishumo yekuverenga kuti utarise iyo stock iripo.
Uye kugadzirwa kwe mamiriro emishumo yemirairo, kutengesa uye vatengi.
Munda SEO (Tsvaga Injini Optimization) inodikanwa yekutsvaga injini Ndokunge, kana peji rako rikabuda rekutanga muGoogle uye mamwe mainjiniya anogara achive nekushanya kwakawanda uye kubudirira mukutengesa pane kana zvichibuda kwekupedzisira ...
Uye kurudziro, unogona kubatanidza izvi kune mamwe mapurojekiti senge MailChimp, kugadzira mishambadziro yekushambadzira kuburikidza neemail kune vatengi vako, nenzira iyoyo ivo vanogamuchira maemail ane zvigadzirwa zvitsva, zvinopihwa, nezvimwe. kune yako maemail pasina kuenda kune spam tireyi.
Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe, ndapota Usakanganwa kusiya zvaunotaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » DIY: Chii chinodiwa kumisikidza online chitoro
Christian Steven Echeverry akadaro
Ndiri kuuya neprojekti yakaita seiyi uye chinyorwa ichi chakandinakira. Kutenda kuzhinji!
Pindura kuna Cristhian Steven Echeverry
Antonio Guzman Simon akadaro
Yakanakisa chinyorwa. Ndatenda nenguva yako
Pindura kuna Antonio Guzmán Simón
Pindura kune zvakakosha1